Nhau - Kubhadharisa Mubatanidzwa: 4 173 nyowani yeruzhinji yekuchaja mirwi yakawedzerwa muna Chivabvu, kumusoro 59.5% gore-ne-gore
Musi waChikumi 11, iyo data yakaburitswa neChina Charge Union zvakaratidza zviri pamutemo kuti kusvika muna Chivabvu 2018, nhengo dzemubatanidzwa dzakarondedzera huwandu hwe266 231 yeruzhinji yekuchaja mirwi, uye kuburikidza nenhengo dzemubatanidzwa, makomba emota akatorwa ne441,422 zvidimbu zvemashoko eruzivo. Yakazara angangoita mazana manomwe mazana manomwe emakumi emakumi emakumi mapfumbamwe ekuchaja.
Panyaya yemaparaji ekuchaja veruzhinji, pane 116761 AC yekuchaja mirwi, 84174 DC kuchaja mirwi, uye 65296 AC uye DC akabatanidza marasha emirwi. Muna Chivabvu 2018, 4,173 yeruzhinji-mhando yekuchaja mirwi yakawedzerwa kupfuura muna Kubvumbi 2018. Kubva muna Chivabvu 2017 kusvika Kubvumbi 2018, ingangoita 8,273 yerudzi-yerudzi rwekuchaja mirwi yakawedzerwa mwedzi wega wega, uye muna Chivabvu 2018, huwandu hwekukura hwaive 59.5%.
Huwandu hwevashandisi vakuru munyika vasvika gumi nematanhatu (huwandu hwenzvimbo dzekuchaja> = 1000), uye mukana wakakosha waive wekutanga. 110,857 mirwi yekuchaja yakavakwa, ichiteverwa neHurumende Grid uye 56,549 mirwi yekuchaja.
Iwo gumi epamusoro ekuchaja murwi munzvimbo yehutongi matunhu ndeaya: 40,663 muBeijing, 34,313 muShanghai, 32,701 muGuangdong, 27,586 muJiangsu, 20,316 muShandong, 12 759 muZhejiang, 11,555 muTianjin, uye 11 232 muHebei. , 10 757 muAnhui uye 7,527 muHubei.
Kuwanda kwenzvimbo dzekuchaja dzeveruzhinji uye dzakazvimirira mumatunhu, matunhu nemaguta zvakawedzera zvakatsiga, uye huwandu hwekuchaja magetsi hwakawedzera zvishoma, zvaiwanzo fanika nemwedzi wapfuura
Simba rekuchaja renyika rinonyanya kuiswa muPearl River Delta, iyo Yangtze Rwizi Delta uye epakati uye kumadokero matunhu. Beijing inonyanyotungamirwa nevoga vanofamba nemotokari; kuyerera kwemagetsi kuGuangdong, Shaanxi, Jiangsu, Shandong, Hubei, Sichuan neFujian inonyanya nebhazi. Mota dzakasarudzika dzinonyanya kushandiswa, dzinowedzerwa nemotokari dzevanofamba; Kuyerera kwemagetsi kwaShanxi kunonyanya kubva pamatekisi, anowedzerwa nemotokari dzevanofamba. Iko kushandiswa kwesimba kwemota dzakasarudzika senge mabhazi emagetsi uye maroja zviri pachena.
Mapurovhinzi gumi epamusoro nemaguta maererano nekuchaja magetsi ane magetsi anoshandiswa mumatunhu masere nemaguta anonyanya kupihwa nemabhazi emagetsi nematekisi. Pakati pavo, Guangdong Province yakatungamira nemamirioni 320.29 kWh.
Kubva muna Chivabvu 2018, kuburikidza nenhengo dzemubatanidzwa wevanogadzira mota (BYD, SAIC, BAIC, Jianghuai, Tesla, Changan, Geely, Chery, Dongfeng Electric, Dongfeng Nissan, Guangzhou Automobile, FAW, Zhidou) sampuli mirwi 441,422, uye huwandu hweakundikana kubhadharisa murwi yaive 31.04%. Pakati pavo, chikamu chemirwi yekuchaja iyo yaisagona kuvakwa nekuda kwe "vashandisi veboka vanovaka yavo mirwi" yaive 16.27%, iyo isina kuenzana nekuda kwe "chivakwa munzvimbo yekugara hachina kushandira pamwe". Chiyero chemapara ekuchaja akavakwa chaive 4.75%. Chiyero chemapepa ekuchaja aisagona kuvakwa nekuda kwekuti "hapana nzvimbo yekumisikidza yekupaka munzvimbo yekugara" yaive 2.56%. Chiyero chemapepa ekuchaja aisagona kuvakwa nekuda kwe "kuchaja kuburikidza nezviteshi zvakatsaurwa" yaive 2.60. %, nekuda kwekuti "hapana nzvimbo yekumisikidza yekupaka panzvimbo yebasa", chikamu chemapepa ekuchaja aisagona kuvakwa i0,7%. Chiyero chemapepa ekuchaja aisagona kuvakwa nekuda kwe "kunetsekana kubhadharisa magetsi panzvimbo yekugara" yaive 0.17%.